Meicet |China Meicet Needle Free Mesotherapy Beauty Machine Collagen Pin HydrPeel Manufacturing sy Factory
Fanerena ny famafazana tanana:5kg/cm³-10kg/cm³
Nahatratra ny halaliny:0.2mm-5mm
Haben'ny milina mpampiantrano:49x44x60sm
Weight of Host Machine:15KGS
Weight of Trolley:18KGS
HydrPeel Mesotherapy Machine Fampidirana
Meicet HydrPeel dia zavamaneno hatsaran-tarehy osmotika tsindrona, tsy misy invasive, multifunctional.Amin'ny fampiasana ny teknolojian'ny onjam-peo tsy misy fangarony TDA, ny vahaolana otrikaina dia atolotra ho any amin'ny faran'ny hoditra, mba hahatratrarana ny vokatry ny hydrating, whitening, moisturizing, fihenan'ny ketrona ary anti-oxidation.
Tsy misy fanjaitra
10.2 mirefy Touch Screen
Fiteny 2- Anglisy, Sinoa
Nahatratra ny halaliny 0.2mm-5mm
Mifanaraka amin'ny vokatra isan-karazany
Ny HydrPeel dia afaka mifanandrify amin'ny vokatra maro samy hafa, toy ny moisturizing, whitening, anti-inflammatoire & akne & fahanterana ary fanadiovana.
Anti-inflammation, Fitsaboana mony
Manjavona ny tasy
Ao amin'ny interface tsara dia azo atao ny misafidy ny faritra miasa (tarehy na vatana).Ny halaliny, ny fatra (fandrefesana) ary ny hafainganam-pandehan'ny famafazana dia azo amboarina.Azo isaina ny fotoana famafazana sisa tavela.Misy A, B ary C, fomba fiasa telo mba hihaona amin'ny filana fandidiana samihafa.
HydrPeel dia manana fomba fiasa telo: A, B, C.
Ny fomba dia fomba mandeha ho azy, ny tifitra dia miato.
Ny fomba B dia fomba fiasa amin'ny tanana: tsindrio indray mandeha ary atsipazo indray mandeha.
C mode dia mandeha ho azy, ny tifitra dia mitohy.
Injector tsy misy fanjaitra
Haingam-pandeha supersonika (450m/s) fidirana haingana.
Fitsaboana tsy invasive.Aza mikasika ny hoditra mivantana mandritra ny fitsaboana.
Ny akora mavitrika dia mavitrika amin'ny alàlan'ny teknolojia oksizenina avo lenta, izay amin'ny lafiny iray dia mampitombo ny votoatin'ny oksizenina ao amin'ny sela, manatsara ny oxygenation, ary amin'ny lafiny iray dia mampiroborobo ny fidirana.
teo aloha: Ny Meicet Professional High-end 3D Body Scanner dia manadihady ny vatana sy ny posture Visbody R Explorer miaraka amin'ny turntable
milina mesotherapy tsara tarehy
milina mesotherapy tsy fanjaitra
fitaovana mesotherapy noninvasive
milina fikarakarana hoditra hatsaran-tarehy